Stress – Page6– Healthy Life Journal
All posts tagged "Stress"
နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲ . . .
လရိပ်မေ (၁) လူအများစုဟာ မိသားစုအရေး၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်ကုန်ရင်း ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်အချိန် မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ့်အတွက် တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ အချိန်ပေးရပါမယ်။ (၂) ကိုယ့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကို ကိုယ်သိပြီးဘယ်အချိန်မှာ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပြီဆိုတာ နားလည်ပါ။...
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကောင်လေးတို့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး သတ်သေချင်စိတ်ရှိနေချိန် အတွေ့ရများသည့် လက္ခဏာများ
ကိုမိုး ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်သတ်သေဖို့ကြံစည်နေချိန်၊ ကြိုးစားနေချိန်မှာ တွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဝေဒနာ လက္ခဏာသက်သာ လျော့ပါးစေဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ထိန်းသူ လူကြီးမိဘထံကို အသိပေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေချင်စိတ်လျော့ကျအောင် ကူညီဖေးမသင့်ပါတယ်။...
ကားပိတ်တဲ့ ဖိစီးမှုဝေဒနာ . . .
ဒေါက်တာဦးအုန်းကျော်(စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး) ဆရာ . . ကျွန်တော်အခုတလော ကားကျပ်၊ ကားပိတ်တဲ့ ဒဏ်ကို မခံစားနိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကားမောင်းရင်း ကားတွေ ပိတ်ပြီး ရှေ့တိုးလို့မရ၊ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ မရဖြစ်နေရင် ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ဖိစီးနေတယ်၊ မွန်းကျပ်ပြီး အသက်ရှူမဝသလို ဖြစ်နေတယ်...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အခါ ရေနစ်သူကို ဝါးကူထိုးတဲ့ စကားတွေပြောမိရင် သူ့စိတ်ကျဝေဒနာ ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ သင့်သူငယ်ချင်း စိတ်ခံစားမှု ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေချင်ရင် ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ စကားတွေရှိပါတယ်။ (၁) တခြားသူတွေက မင်းထက်ပိုဆိုးပါတယ်ကွာ အဲဒီလို...
စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်အစာတွေနဲ့ တွန်းလှန်နိုင်သလဲ
စိတ်ဖိစီးမှုကို လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်၊ ချောကလက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ လိမ္မော်သီး၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ထောပတ်သီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီးစတာတွေနဲ့ တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ မျက်လုံးလှုပ်တာက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိုးမရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် မျက်ခွံလှုပ်လာတာနဲ့ မအောင့်နိုင်မအည်းနိုင်အောင် မျက်တောင်ခတ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာတို့ဟာ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာကာ မြင်မြင်သမျှကို မျက်လုံးလိုက်မှိတ်ပြသလိုမျိုးနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။ ဆေးပညာအရ Myokymia လို့ခေါ်တဲ့ မျက်လုံးလှုပ်တာဟာ မျက်လုံးနားက...
သားသမီးအတွက် ပူပင်လွန်းလို့ ည ည အိပ်မပျော်နိုင် . . .
မေး. ည ညဆို သားလူပျို အိမ်ပြန်မရောက်သေးရင် လမ်းမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုပြီး ကျွန်မစိတ်ပူမိတယ်ဆရာ၊ အိမ်ထောင်သည် သမီးအတွက်ကျပြန်တော့ သူ့ယောကျာ်းနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုပြီး ပူပန်မိပြန်ရော ဆရာ၊ သူတို့အတွက် ငွေရေးကြေးရေးတင်မက လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေအထိ အစစအရာရာ ကျွန်မပူပင်နေရပါတယ်။ အဲဒီလိုစိတ်နဲ့ ကျွန်မဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ည...
အလုပ်လုပ်ရင်း အားအင် ကုန်ခမ်းလာလျှင် . .
သဒ္ဒါထက် အလုပ်ထဲမှာ အဆင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘဝ ခရီးလမ်းမှာ ဆက်မလျှောက်လှမ်း လိုတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဓာတ်တွေ အကြီးအကျယ် ကျလာပြီဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ပြန်လည် တက်ကြွလာစေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ – အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက သင့်ကို...
ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းသက်သာစေမည့် နည်းလမ်း
– လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကြား အသားစိုင်နေရာ ကို ဖိနှိပ်ပေးပါ။ – ဒီနေရာကို တရုတ်ဆေးပညာအရ ဟိုကုနေရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ – အဲဒီအသားစိုင်နေရာကို စက္ကန့် ၃၀ ကြာ ခပ်တင်းတင်း ဖိနှိပ်ပေးတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။ – နာကျင်မှု...
စိတ်ဖိစီးမှုများနေချိန် တကယ် အပန်းပြေသွား စေမည့် ရနံ့များ
မိမိုး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အံ့သြစရာကောင်းတာက လေယာဉ်ဆီနံ့ရတဲ့အခါ တချို့လူတွေက စိတ်အပန်းပြေသွားပါသတဲ့။ အပန်းဖြေ ခရီးသွားတဲ့အခါ ရတဲ့ အနံ့မျိုးဖြစ်လို့ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုများ နေချိန်မှာ အပန်းပြေသွားချင်တယ် ဆိုရင် အောက်ပါအနံ့တွေကို အချိန်တစ်မိနစ်လောက် ရှူပေးသင့်ပါ တယ်။ (၁) သင်္ဘော ဒါမှမဟုတ်...